“Foire d’Ylang” – Mpandraharaha vehivavy : fifanakalozana tamin’ireo Maorisianina sy Aostralianina | NewsMada
“Foire d’Ylang” – Mpandraharaha vehivavy : fifanakalozana tamin’ireo Maorisianina sy Aostralianina
Ny 11 hatramin’ny 13 aogositra teo, ny « Foire d’Ylang » natao tany Nosy Be. Nandritra io fotoana io, betsaka ny fiaraha-midinika sy ny fifanakalozana teo amin’ny samy mpandraharaha, indrindra ny vehivavy mpandraharaha any an-toerana. Saika nahitana azy ireo avokoa ny tranoheva 30 tamin’io fotoana io, mahakasika sehatra maro : asa tanana, fambolena, varotra, harena an-kibon’ny tany, fahasalamana, fizahantany, fiantohan-draharaha.
Nitarika ny fotoana ny vondron’ireo mpandraharaha vehivavy (Groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar – GFEM), nifampidinika tamin’ireo mpandraharaha avy any Nosy Maorisy sy Aostralia. Nilaza ho afa-po tanteraka ireo vehivavy malagasy tamin’izany fifampidinihana izany, nampisy fifanakalozana na fiaraha-miombon’antoka.
“Foire d’Ylang », fotoana teo ambany fiahian’ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, i Nourdine Chabani, nanamafy ny anjara toeran’ny vehivavy sy ny fahavitrihan’izy ireo eo amin’ny fandraharahana. Nosinganin’ny minisitra ny fananganana indostria madinika ho fampandrosoana any amin’izay toerana misy azy ireo.
Any amin’ny faritra maro, tsy vitsy ny vehivavy miditra amin’ny sehatry ny fandraharahana, saingy, mbola tsy omena toky loatra izy ireo. Koa ny fiaraha-mivondrona ao anatin’ny fikambanana, toy ny GFEM, hery iray no antoka ho azy ireo amin’izay asa fihariana sy ny sehatra misy azy.